Ukukhwela emaphethelweni entanyeni yama-sweatshirts: imidwebo, isinyathelo se-rascal, inkcazo kunye nevidiyo
Ukukhangela umgca wemveliso
Ingxaki enjalo, njengokuxuba umda we-shawl okanye omnye umkhiqizo, unomdla kakhulu kwiinaliti zeenalwazi. Umsebenzi ukhonjiwe, kwaye akukho nto ilukhuni kuyo. Kukho iindlela ezininzi zokudala iirhasi. Sincoma ukuba uwafunde ngokufunda isihloko sethu.
Ifoto yeekhonkco zomgca
I-Kayma - nangona yincinci, kodwa isakabaluleka kakhulu imveliso yeekhredithi. Ngaphandle kwayo, imodeli ibonakala ingapheliyo kwaye ingaphelelanga. Ziziphi iindlela zokwenza iimbopho ezifumanekayo kubahlali bamanamhlanje? Zonke iimbono ziboniswa kwisithombe.
Isicwangciso sokuhlobisa kunye nokubopha imida yeemveliso "I-Rachy inyathelo"
I-Rachy inyathelo yindlela yobugcisa yokugqiba. Umda owenziwe ngaloo ndlela uhle kwaye uhle. Ngomxholo walo, ukugqitywa okunjalo kwenziwa ngeteknolo elula. Le nto elula ngokubopha isebenza kwimveliso eyahlukeneyo. Kulungele ukuba kuqalwe. Kufuneka uqale udibanise ekupheleni. Faka ikhonkco kwindawo ephantsi. Emva koko ubambe umgca womsebenzi uze uyikhuphe ngaphandle. Yenza i-loop emoyeni yokuphakamisa. Phinda ungene kwikhonkco elandelayo ngakwesokudla.
Yibambe umtya uze uyikhuphe ngaphandle. Ngoku unamabhola amabini awela ngapha. Bamba umtya womsebenzi uze ubophe ndawonye. Phinda uphele ekupheleni koluhlu. Ngenxa yoko, kufuneka ujikeleze emaphethelweni omgca olula kunye ochanekileyo wokudibanisa, njengesithombeni.
Inkcazo ngezinyathelo-nenyathelo kwinkqubo yokudibanisa imiphetho entanyeni kunye nomzekelo we "Pico"
Ukufumana ukugqibezela ngakumbi kunye nokuhle, unako ukudibanisa umzekelo othi "Pico". Lo mhlobiso ogqithisiweyo ufanelekile ukugqiba ngokupheleleyo naziphi na izinto ezenziwe ngeenaliti zokudibanisa okanye i-crochet. Ukucwangciswa kwenziwa ngocwangciso oluboniswe ngezantsi.
Elinye iqela le "Pico" linamazinyo okuqala, enziwe ngamakholomu ngaphandle kwekhanda. Ukwazi uqala ngakwesokudla kwinqanaba lomzekelo. Yenza imimoya emithathu kwinqanaba ukusuka ekunene ukuya kwesobunxele. Emva koko, kwisiseko seyokugqibela, nje ubophe ibha elula. Eminye iifolothi ezinjalo, kwaye uya kufumana umhlobiso ococekileyo. Olunye uhlobo oluthile lwe "Pico" lusetyenziselwa ukuhlobisa imbopho yokugqoka. Kule meko, kuya kufuneka ubophe umgca wokuqala wokuqala wokutshintshela umoya kunye nezithuba ezimbini eziqhelekileyo. Emva koko kufuneka kutyunjwe. Ngomqolo wesibini, iikholomu zifumaneka phantsi kweekhonkco, eziququzelelwe ngumoya womoya. Umsebenzi ugqityiweyo kumqolo wesithathu, apho kuyimfuneko ukwenza izikhonkwane kwimigqomo yamakholomu ngaphandle kwekhonkco. Ingqungquthela yesibini ye "Pico" yipatheni ngendlela yemali. Kwakhona kufanelekile ukuhlobisa entanyeni yomntwana okanye isambatho somntwana. Iskimu siyinto elula kakhulu: kuqala, imithombo emithathu yomoya isuswe, ke iikholomu ezimbini kunye nenkokhelo enye kwisiseko esisodwa. Ngoko kufuneka ichaneke ekupheleni koluhlu.
Ngaba ufuna ukuhlobisa ingubo yakho ngezohlobiso ezinjalo? Emva koko sebenzisa imimiselo engezantsi. Baza kukunceda udale iphethini evulekileyo yomsebenzi kuyo nayiphi na imveliso. Ukuguquka kuvela kakhulu kuntle kwaye kunesidima. Uphinda umzekelo weentambo ezincinci.
Okokuqala, kufuneka udibanise imivalo engama-9. Emva koko-5 inkinobho zomoya, eziza kwenza i-arc. Ukuphela kwayo kufuneka kuguqulwe kwindlela eyahlukileyo, iya kungena kwisiseko sesihlanu. Sibophelela umnqamlezo ngamakholam elula e-monosyllabic. Bafuna kuphela iziqwenga ezilisithoba. Sibeka ezinye iikholomu ezintlanu ngaphesheya kwe-arc. Ngoko siqhubela kwelinye igobolondo. Izahlulo zesibini kunye nezilandelelwano zitshintshiwe, zibhekiselele kwingcaciso kunye nedatha yeskimu. Ngale ndlela, imiqolo emigqabini ingenziwa. Umgca omncinci omncinci akayi kushiya nayiphi na intombazana engenandaba. Ingasetyenziselwa nje ukuhlobisa entanyeni yomsi, kodwa kunye nokuhlobisa umbhoxo, i-shawl, i-tippet okanye i-hem yokugqoka.
Ifoto kunye nevidiyo yenkqubo yokubophezela emacaleni
Ukuhlobisa isikhwele sakho, ingubo okanye iimpahla, kufuneka ube ne-arsenal yeendlela ezininzi zokubopha imida. Zizo kwicandelo elingentla. Akukho nto inzima kwinkqubo yokudala iphethini evulekile. Jonga iifoto zomsebenzi osondeleyo kwaye uqiniseke ngawo.
Sinikeza ingcaciso elula yomtya. Iphethini iyajika ibe yimisebenzi evulekileyo, kwaye ekusebenziseni kwayo ayiyi kuthatha ngaphezu kweyure lakho ixesha.
Kwiqoqo lethu kukho iklasi ephezulu kakhulu ekudaleni iiplanga kwiintlobo zeemveliso ezinamaqhina. Jonga ividiyo uze ufunde indlela yokwenza i-hooknet enhle ye-fishnet:
Iimfihlakalo zikagogo zikaMagogo ekubophelelweni kwee-shawls
Akuyena wonke umntu ophumelela ekufundeni kwi-grandmothers-needlewomen. Ngoko ke, sifuna ukuphucula imeko kwaye sikunike iziphakamiso ezimbalwa malunga nokudibanisa i-shawls kunye neenkosi ezixhaswe ngamabhunga. Okokuqala, ngaphambi kokuba uqale umsebenzi osisiseko, yenza isampuli. Kuya kukunceda ukuba ufumane ubungqina bokubambisana. Ukongeza, uya kuba nethuba lokuzama le nxalenye kwimveliso ephambili. Okwesibini, sebenzisa kuphela intambo efanayo yokwenza umda, apho idayeni elalikhutshwe khona. Ingaba nombala ohlukileyo, kodwa ungabonakali. Okwesithathu, sebenzisa isikhokelo esifanayo sokubamba kwakho okwenza umsebenzi oyintloko. Ukuba akukho nto inokwenzeka, umzekelo, isixhobo siphukile okanye silahlekile, sithenga ngokufanayo. Ubungakanani bunokukunceda ukuba ugqibe kwisitoreji.
I-crochet ekhayeni elihle
Isikhwama sokuvuleka kwintombazana ekhonjiweyo
Ungayibopha njani ijoka lesaha?
I-Raglan kunye neenaliti zokudibanisa: imizekelo ngemifanekiso kunye neenkcazo
Ukwazi nge-cardigan ukudibanisa inaliti - iimodeli kunye neepateni
I-crochet ene-plaid kunye nezikwere ezineepateni
I-Horoscope ye-Capricorn-abafazi ngoNovemba 2016
Ukupheka idoki ehovini ngokubanzi ukuze ithambile kwaye ihlaziyeke: Ukupheka - iminwe
Intombi kaRosa Syabitova iphupha lomyeni omtsha
Indlela yokwenza ibhaluni?
Iipascards ezimnandi ngo-Meyi 9 ngezandla zabo: ezintathu-dimensional, kwizicwangciso zokucima kunye ne-scrapbooking
Iidiski kwi-multivarquet: zokupheka okukhawulezayo kunye okumnandi zoNyaka omtsha
Endleleni eya kumzimba omzimba, okanye Indlela yokulahlekelwa isisindo nge-5 kg ​​kwiintsuku ezintathu, ngeveki, ngenyanga
Izinto ezintathu ezifunekayo kwindlu encinane